Natokana ho an’ireo mpianatra ao amin’ny T6, T7, T8 ary T9 ireo boky ireo. Mahakasina ireo taranja fototra telo dia ny Malagasy, frantsay ary matematika ireo boky irep. Tanjon’ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa raha namokatra ireo boky ireo ny hanatevina ny fahalalana efa azon’ireo mpianatra sy hikolokolo ary hanamafy ny fitadidian’izy ireo. Ireo boky ireo rahateo dia ahitana famintinana lesona, fampiharana ary paika samihafa hitsapana ny fari-pahaizan’ny mpianatra amin’ny alalan’ny fampiharana sy fanitsiana. Hanampy ireo mpianatra hahafahan’izy ireo mampiana-tena mandritra izao vanim-potoanan’ny fihibohana izao ny fisian’ireo boky ireo raha ny nambaran’ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana ara-teknika sy arak’asa Andriamanana Rijasoa, ankoatra ny famokarana ilay fandaharana « za koa mba te-hahay » sy « kilasy pour tous » izay mandeha amin’ny haino aman-jery . Hisitraka ireo boky ireo avokoa ny mpianatra amin’ny faritra 22 raha ny fanazavany satria miisa 636.000 ireo boky novokarina sy hozaraina ireo, izay ny UNICEF no namatsy ara-bola izany.